Vintage Maltese Bhazi
Isu tinodada kushandisa imwe yepamusoro uye yakawanda yeChino Hire, Mini Bus, uye Driven Car Fleet.
Zita reMutungamiri muMattare Transport
Zita redu rakavakirwa pane kuzvipira kune maitiro akaisvonaka, kushanda kwakanaka, uye kutarisa kwevatengi.
70 Makore eChikoro Hire
Kubva 1944, takave nerugare rwepfungwa kune vatengi vanoda zvifambiso zvekufambisa kuMalta.
WAKABUDA KUPARAMOUNT CHEACHES
Paramount Coaches ndiyo inotungamirira kambani yekutakura muMalta inopa Coach Hire, Mini Bus, uye Driver Car services kuMalta kubvira 1944. Chivimbiso chedu ndechokuti unyanzvi hunotarisa pane zvinodiwa nevatengi kuve nechokwadi chekutakura nzira dzekutakura.
Isu tinozvirumbidza nekushanda imwe yezvikepe zveMalata zvikuru uye zvemazuva ano kupa hurumende yepamusoro yekushumira kuzvikoro, vunivhesiti, ma Embassies, Hotels, DMCs, Tour Operators, Hurumende neNharaunda dzehurumende.
Vateereri vedu vanoramba vachitisarudza kuti tive nerugare rwepfungwa runovapa. Isu tinoita izvi kuburikidza neruzivo rwedu rwakanaka rwekutakura muMalta uye yedu yakasimba mukubata chero zviitiko zvinogona kubuda.
Kuburikidza nehutano hwemunharaunda yedu, isu tinokwanisa kupa zvivimbiso zvinotendwa uye zvisingakwanisi kutakura zvakapoteredza kuMalta nokuda kwezviitiko zvemakambani, vafambisi vengarava yevashambadziro, vashambadziri vendege uye kutakura chikoro / vekoroji.
CHIKORO & COLLEGE KUFAMBA
Isu tiri ikambani yakakura yekutakura chikoro muMalta inopa kutakura kuvadzidzi vevanhu, vega, vemitauro yekunze uye chechikoro.
Tinopa huwandu hwemarwendo emaodzanyemba eMalta uye Gozo kusika ruzivo rusingaenzaniswi rwezvitsuwa zvedu zvepanyika uye pfuma.
Kupa mukana wekufamba kwenguva uye unyanzvi wekumhanya kwepamhepo kunopfurikidza pakati peMalta International Airport uye mahotera / nzvimbo dzinotarisana neMalta neGozo.
CRUISE LINER TERMINAL KUCHINDA
Kupa migwagwa kubva pazvikepe zvekutinhira uye kunongedzera kune imwe nzvimbo inotumirwa kubva kumahotera uye nzvimbo dzakapoteredza maDalta Islands.
CORPORATE & ZVIMWE ZVAKAITIKA
Kununura hurumende kutakura, kuendesa ndege, uye kuona nzvimbo dzinotarisa kuburikidza nehutano hwakanaka hwekugadzirira, kushanda nokukurumidza, uye kuvimbika kwakakwana.
KUVIMBIKA & KUNYANYA KUNYANYA KWEZVINHU ZVINHU
Iwe unofarira kuverenga here kana kuti kubvunzurudza, unzwe wakasununguka kutaurirana nevashandi vedu uye vane ushamwari. Vachakubatsira pakupindura mibvunzo chero ipi zvayo yaungave nayo uye mukusangana nekutakura kwako zvinoda.
Paramount makochi vave vachigadzira zvigaro zvekufambisa kuMalta Football Association kubva ku2002.
Aya mazano akatevera enyika uye munyika yose akazivikanwa ose akashandiswa zvakanaka neParamount Coaches:
ARMENIA, BULGARIA, CYPRUS, DENEMARK, FINLAND, GEORGIA, GREECE, INI, ISRAEL, LATVIA, LUXENBOURG, MACEDONIA, MANCHESTER UNITED, NORTHERN IRELAND, NORWAY, PORTUGAL, SWEDEN,
"EF Mutauro Mutauro wakanga uri kushandisa Paramount Garages nokuda kwezvakawanda zvekufambisa zvaidiwa kwemakore anopfuura 15. Zvikumbiro zvedu zvakagara zvichisangana nehuwandu hwehutano uye kuburikidza nebasa iro rave richive rakavimbika uye rakavimbika. Unhu hwevadzidzi uye mafungiro evatyairi vanoratidzawo izvi. "
Nenguva ichangobva kubuda nemhenderekedzo yeva 300 veAmerica nedzimwe nyika kubva Tripoli, Libya shure kwedu, ndaida kutora nguva uye ini ndoga ndikuwedzera kuvonga kwechokwadi kwamuri uye Paramount Coaches Ltd. Nokuda kwekubatsira kwako panguva yakawanda panguva yekubuda uye kuedza kwakatevera anobatsira vanoponeswa.
Kuda kwenyu kurongedza zvakanyanya nevashandi veEmbassy pamusana pekudzikinura kwaive kwakakosha pakuita zvakanaka uye zvakanakisisa vapukunyuka vakakwanisa kuburuka ndokugamuchira rubatsiro runodikanwa. Kunyanya, kuchinja kwako uye kunzwisisa kwako sezvo purogiramu yekufambisa yefurati yakashandurwa pamwe chete nemamiriro okunze yakarumbidzwa zvechokwadi. Hatina kugona kubatsira vatiza kunze kwekutsigirwa nekuzvipira kubva kuParamount Coaches Ltd. "
US EMBASSY WEMALTA
Mr. Douglas W. Kmiec - Mumiririri weUnited States
"Paramount Garages ye Mostaa, iye zvino ave achishanda kumatare eYunivhesiti akasiyana-siyana ane maitirwo anobhadhara kutakura, kwemakore ekupedzisira e35.
Munguva iyi, tatoona iyi yekutakura kambani yakatendeseka uye yakawanda yevatengi. Zvichida kumudzidzisi, motokari, motokari inotungamirirwa nemotokari nguva yekubata uye kushanda kwave ndiyo yakanakisisa inogona kusvika pazvitsuwa.
Kunze kwekukwikwidzana kwemitambo, vatyairi vekuremekedza uye nguva yekuwana nguva takawana Paramount kuva musikana anokosha mukutibatsira kuti tive nekukwikwidzana nekuisa zvipo zvakanakisisa kune vadzidzi vedu vekune dzimwe nyika uye vashanyi vezvidzidzo. "
CHII CHINOITA US TINONYANYA
Makore edu e70 ekuzvipira kune zvakanakisisa akatipa ruzivo rwakawanda munharaunda yekutakura muMalta, tichibvumira kuti tive nerugare rwepfungwa uye basa rebasa kune vatengi vedu.
70 Makore eZviitiko
Zuva nezuva ndiro zuva idzva kwatiri uye tinoshanda zvakaoma chaizvo kugutsa vatengi vedu kwose kwose.
Vhura 24 / 7
Yedu Hutano & Chengetedzo Policy
Copyright © 2017 - Yakagadzirwa Eyelead + Eyetech . Kodzero dzose dzakachengetedzwa